Semalt: WordPress साइट प्रकार - सबैभन्दा आवश्यक र प्रसिद्ध
जबकि WordPress ले धेरै सुविधाहरू र विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दछ, त्यहाँ अझै धेरै प्रकार्यहरू यसको कोरबाट हराइरहेका छन्। सबै हराएको टुक्राहरू भर्न उत्तम र सब भन्दा चाँडो तरीका भनेको आफैलाई सही प्रकारको प्लगइनहरू पाउनु हो। WordPress प्लगइनहरूले वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूको लागि विभिन्न प्रकारका विकल्पहरू र अनुकूलन प्रदान गर्दछ। WordPress प्लगइन डाइरेक्टरीमा ,000२,००० भन्दा बढी विकल्पहरूको साथ, तपाईंलाई सहि छनौट गर्न यो सजिलो हुँदैन। त्यसोभए, हामीसँग दुबै नि: शुल्क र प्रीमियम WordPress प्लगइनहरूको संग्रह छ। तिनीहरूले निश्चित रूपमा तपाईंलाई साइटबाट राम्रोदेखि उत्तमसम्म लैजान मद्दत गर्दछ।
ओलिभर किंग, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, भन्छन् कि जब तपाईं एक ace विकासकर्ता हुनुहुन्न, तपाईं यी WordPress WordPress प्लगइनहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो वेबसाइट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
१. ब्याकअप बडी
यो वर्डप्रेस प्लगइन को लागी कम्तिमा $ 80 प्रति वर्ष लागत र एकै समयमा दुई भन्दा बढि वेबसाईटहरुको जगेडा गर्न मद्दत गर्‍यो। यसको जगेडा तालिका गर्ने र फाईलहरू प्रसिद्ध क्लाउड भण्डारण उपकरणमा पठाउन यसको क्षमताको कारण, यो प्लगइनले तपाईंको फाईलहरू हराउन दिदैन जब तपाईंको साइट राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। यसले तपाईंलाई बिभिन्न ब्याकअप विकल्पहरूबाट छनौट गर्न सक्षम गर्दछ, यसको मतलब जुन तपाईं आफ्नो डेटाबेसमा फाइलहरू कहाँ बचत गर्न चाहानुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। पोष्ट र पृष्ठहरु बाट तपाईको टिप्पणी र सेटिंग्स को लागी, तपाई सबै कुराहरु सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि वेब होस्टिंग कम्पनीहरू तपाईंको फाईलहरू ब्याक अप गर्न झुकाव राख्छन्, तपाईं तिनीहरूको सीमित विकल्पहरूको कारण तिनीहरूमा भर पर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं ब्याकअप बडी प्लगइनको साथ जान चाहानु हुन्न भने, तपाईं VaultPress वा डुप्लिकेटर प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
२. वर्डफेंस सुरक्षा
सबै भन्दा राम्रो पक्ष यो प्लगइन दुबै निःशुल्क र प्रीमियम संस्करणहरूमा उपलब्ध छ। वर्डफेंस सुरक्षा एक सर्व-इन-वन टूलकिट हो जसले तपाईंको WordPress साइटलाई भाइरस र मालवेयरबाट बचाउँछ। यसले पनी बल आक्रमणकारीहरूलाई रोक्न मद्दत पुर्‍याउँछ र विस्तृत सुविधाहरूको साथ निर्मित फायरवाल पनि छ। साना वेबसाइटहरूका लागि, वर्डफेंस सुरक्षाको नि: शुल्क संस्करण राम्रो छ, तर ठूला वेबसाइटहरूका लागि यसको सशुल्क संस्करण सबैभन्दा उपयुक्त छ। तपाईं यो प्लगइन प्रयोग गरेर तपाईंको साइटमा श login्कास्पद लग इन प्रयासहरू रोक्न सक्नुहुन्छ, र यसका केही विकल्पहरू आईमाहरू सुरक्षा र लगइन लकडाउन हुन्।
Gra. गुरुत्वाकर्षण फारामहरू
यो एक उत्तम र सबैभन्दा प्रख्यात व्यावसायिक वर्डप्रेस WordPress प्लगइनहरू मध्ये एक हो। सामान्य रूपमा, यो प्लगइनले तपाईंको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् फारमहरू सिर्जना गर्दछ। जटिल स्तरमा, यो प्लगइनले तपाईंको साइटको लागि क्षेत्रहरू लुकाउँदछ र तपाईंको आगन्तुकहरूले कसरी प्रतिक्रिया गर्दछन् त्यसमा निर्भर गर्दछ। तपाईं अनलाईन भुक्तानी पनि स्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ, प्रयोगकर्ताहरूलाई मेलचिम सूचीमा सदस्यता लिन आग्रह गर्नुहोस् र यस प्लगइनमार्फत अन्य समान कार्यहरू गर्न। भुक्तान गरिएको संस्करणको लागत $ add and छ र एड-अनको भार छ। यसको केहि विकल्पहरू सम्पर्क फार्म and र द्रुत सुरक्षित सम्पर्क फारम हुन्।
Add. AddToAny द्वारा बटनहरू साझेदारी गर्नुहोस्
केहि महिनाहरु को लागी, सामाजिक मिडिया साइटहरु हाम्रो जीवन को एक अनिवार्य हिस्सा भएको छ। शेयर बटनहरू को साथ, तपाईं आफ्नो WordPress साइटमा सामाजिक मिडिया लिंक अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ। यो अत्यधिक अनुकूलन योग्य र यसको सेवाहरू र विकल्पहरूको सन्दर्भमा उपयोगी छ। त्यहाँ एक सय भन्दा बढी सेवाहरू तपाइँको आगन्तुकहरु लाई संलग्न गर्न को लागी र तपाइँको सामग्री को धेरै भ्रमणहरू छन्। तपाइँ सजिलैसँग तपाइँको साइटमा देखाउन चाहानुहुन्छ सामाजिक मिडिया विकल्पहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ। केहि उत्तम विकल्पहरू एडीटिस द्वारा शेयराहोलिक र सेयर बटनहरू हुन्।
WordPress. WordPress WordPress
जब यो एसईओ को लागी, योआस्ट भन्दा राम्रो विकल्प छैन। यो सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा प्रसिद्ध WordPress प्लगइन हो। तपाईं पृष्ठ-द्वारा-पृष्ठ अप्टिमाइजेसन, कोटीहरू, र स्ट्यान्डआउट विकल्पहरू जस्ता सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं ब्रेडक्रम्ब नेभिगेसनहरू, स्वतः उत्पन्न साइटम्याप, सोशल मीडिया सेटिंग्स र अन्य चीजहरू यो WordPress प्लगइन प्रयोग गरेर तपाईंको WordPress साइटमा थप्न सक्नुहुनेछ। यसको केहि विकल्पहरू सबै एक एसईओ प्याक र एसईओ अल्टिमेटमा छन्।